Efa nieritreritra ny hanova ny fialam-boly ho orinasa ve ianao? | Bezzia
Maria vazquez | 12/01/2022 10:00 | Ocio
Efa nieritreritra ny hamorona a raharaham-barotra manodidina ny fialam-boly mamorona sa artista? Matoky izahay fa eo anivonareo dia maro aminareo no efa nieritreritra an'izany saingy avy eo dia natahotra ny handray ny hitsangatsangana, diso ve izahay? Androany, ny tanjonay dia ny hiheveranao azy io ho toy ny fotoana ahazoana vola amin'ny zavatra tianao indrindra.
Mahay manao hosodoko, manjaitra, manao hoditra, manamboatra tanimanga, knitting na sary ve ianao? Ny fiangaviana amin'ny zavatra tokana sy tena izy amin'izao fotoana izao dia filazana fa amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy afaka manampy anao hamatsy vola ny fialambolinao. Betsaka ny orinasa mahasoa izay teraka toy izany, saingy tsy resaka talenta sy vintana fotsiny izany; ao ambadika misy foana a drafitra, fiofanana ary asa. Te-hahafantatra ny fanalahidy hanovana ny fialam-boly ho orinasa ve ianao? Zarainay aminao izy ireo anio
1 Manaova drafitra
2 Hevero ho asa izany
3 endrika ary anontanio
4 Ampahafantaro ny asanao
5 Mamorona fifanarahana sy lalana vaovao
Mitaky drafitra ny mamadika hevitra ho lasa fahafahana. Y hanao drafitra Tsy maintsy mametraka fanontaniana sasantsasany: Manana fitaovana mety ve aho hamadika ny fialamboliko ho orinasa? Mahavelona ara-toekarena ve izany? Inona no tiako hamidy ary amin'iza?
Tena samy hafa ny mankafy fialamboly mamorona sy mivelona amin'izany. Mba hivelomana amin'izany ankoatra ny asa ataonao dia tsy maintsy manangana mpihaino ianao ary Avereno ho asa ny fialam-boly. Sa inona no mitovy ampifanarahana amin'ny tontolon'ny fandraharahana be pitsiny ny fialam-boly ary tsy ho vita ao anatin'ny roa andro izany.
Raha mitadidy izany dia zava-dehibe izany drafitra paikady Hatrany am-boalohany. Paikady izay ho mpitari-dalana mandritra ny dingana voalohany, ny sarotra indrindra! tadidio foana fa mila fanovana izany rehefa mandroso ianao. Raha matahotra ny loza ianao, dia eritrereto aloha ny tetika iray ahafahanao mivelona amin'ny asa tapa-potoana ho an'ny hafa ary manokan-tena ho an'ny fialambolyo ny antsasany. Hisy ny fotoana hirosoana.
Hevero ho asa izany
Raha te hahazo vola ianao dia tsy maintsy manomboka Hevero ho asa ny fialam-boly anao. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy maintsy manao laharam-pahamehana sy manao drafitra isan-kerinandro ianao, tsy miankina amin'ny tetikasa tsy maintsy atolotrao ihany fa amin'ny asa mifameno amin'ny maha-mpandraharaha.
Ny fanombohana raharaham-barotra amin'ny fialam-boly ankafizinay dia mandrisika, fa ny maha-tompon-tena sy miankina amin'ny tena tonga miaraka amin'ny andraikitra maromaro. Mila fotoana ianao hampiofanana, hamoronana, hiatrehana ny mpanjifanao ary hitantana ny ampahany ara-teknika amin'ny orinasa. Ary eny, fandaharam-potoana mba tsy hanadino na inona na inona.
endrika ary anontanio
Mety efa nandany taona maro ianao natokana ho an'io fialamboly kasainao hivadika ho orinasa io. Ary tsy misalasala izahay fa nahazo fahalalana nandritra ny taona maro izay nanatsara anao ianao, fa raha tsy manana izany koa ianao fahalalana fitantanana orinasa Ho sarotra aminao ny hampandroso orinasa.
Zava-dehibe ny fiofanana. Manaova fianarana momba ny varotra sy ny varotra an-tserasera, ny kaonty ary ny tambajotra hahafantarana ny fomba hahazoana tombony betsaka amin'izy ireo. Ary mifandraisa amin'ireo matihanina avy amin'ny sehatra iray na fikambanan'ny orinasa izay afaka manoro anao sy manohana anao amin'ny tetikasanao. Miresaha amin'ny matihanina hafa mazàna manazava ny fomba nanombohan'izy ireo ny lalana natombokao taona maro lasa izay. Ary izy ireo dia efa nianatra nifototra tamin'ny fanapahan-kevitra ratsy sy tsara, fahadisoana ary fahombiazana.
Ampahafantaro ny asanao
Amin'izao fotoana izao dia tena ilaina ny fanatrehana an-tserasera. Ny tambajotra sosialy no fitaovana fototra hanatrarana ny tanjonao na ny mpihaino anao. Fa mba hisongadina ao amin'izy ireo dia mila mamorona marika ho matihanina, tsipika an-tsary izay ahafantaran'ny mpampiasa anao ary mampisongadina anao amin'ny fifaninanana.
Ao amin'ny tambajotra, indrindra amin'ny Instagram, ity endrika marika ity dia tena ilaina. Fa aza mametra ny tenanao amin'ny fandefasana sary vokatra; ny mety ho mpanjifa dia hiombom-pihetseham-po haingana kokoa amin'ny asanao raha avelanao hahita ny fomba fiasanao, ny fitaovana ampiasainao, na izay manentana anao; ny lafiny manokana anao.
Eritrereto fa ankoatra ny fahazoana vola amin'ireo vokatra noforoninao ireo dia azonao atao ny manolotra amin'ny ho avy fitaovana sy fanalahidy mba hahafahan'ny mpampiasa mianatra manao ny zavaboariny manokana. Mety ho fomba iray hanamafisana ny asanao izany rehefa nahavita nanao lavaka ho an'ny tenanao ianao.
Mamorona fifanarahana sy lalana vaovao
Na inona na inona ataonao dia hisy olona mitovy hevitra amin'ny zavakantonao. Ny fitadiavana azy ireo sy ny famoronana synergie dia mety hitondra anjara biriky amin'ny fitomboan'ny orinasanao. fiarahamiasa Na miaraka amin'ny mombamomba hafa amin'ny tambajotra na miaraka amin'ny famoahana manokana, dia mpiara-miasa tsara foana izy ireo.
Hanampy anao hamadika ny fialam-boly ho famoronana orinasa ihany koa izany lalana na fitaovana vaovao ho an'ny vokatrao izay mampiavaka anao amin'ny fifaninanana. Rehefa manomboka orinasa iray dia ilaina ny mifantoka amin'ny fanavahana.
Efa nieritreritra ny hanova ny fialam-boly ho orinasa ve ianao? Mitsangàna! Raha toa ka tsy zavatra mitaky fampiasam-bola lehibe voalohany izany, andramo! Raha mieritreritra be loatra ianao dia avelanao handeha indray. Ao amin'ny Bezzia dia mampanantena izahay fa hanitatra ny sasany amin'ireo hevitra ireo tsy ho ela miaraka amin'ny fitaovana sy fampahalalana bebe kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Lifestyle » Ocio » Efa nieritreritra ny hanova ny fialam-boly ho orinasa ve ianao?
Pregorexia, tahotra ny hahazo lanja mandritra ny fitondrana vohoka